Ragga Iyo Haweenka Aysan Marnaba Iloobin Cimrigooda? - iftineducation.com
Ragga Iyo Haweenka Aysan Marnaba Iloobin
iftineducation.com –Haweeneyda la leeyahay:Waa haweyneyda leh ninka qeybihiisa kala duwan oo dhan iyo sidoo kale noloshiisa, waa ay kala qeyb qaadaneysaa oo way lasocotaa ilbiriqsi waliba oo waxay dareemeysaa faah faahinta noloshiisa sida haddii uu faraxsan yahay iyo haddii uu murugeysan yahay, fikradihiisa iyo qorsheyaashiisa.
Iyadoo aanan loo dareemeynin in ay daawaneyso oo ay ku kormeereyso dhacdo waliba hayeeshee wax waliba oo dhacaya goob joog bay u tahay, haweeneydani waa tan lahaata raga oo dhan.. waxayna soo galeysaa haweenka aanu ragoodu iloobeynin waayo waxay ku xiran tahay dhamaan xusuustiisa kala duwan ee ku tacaluqda noloshiisa.
Haweeneyda sabarka Badan
Haweeneydiisu waa mida kor u qaada waxyaabaha uu haminaya kuna dhiiragelisa si fiicanna u ogsoon xilliga looga baahan yahay in ninkeeda ay u soo xaadirto sidoo kalena ogsoon waxa ay ku oraneyso si naxariis iyo kalgaceyl ay kujirto una sabreysa illaa sidii ay ku baratay uu kusoo laabto kulana dhaqmeysa xikmad iyo caqli…. Tani waa haweenka raggu aysan marnaba iloobi Karin si waliba oo xaalku noqdo.
Nninka waxa uu dareemayaa xilliyadaasi raganimo dheeri oo xaqiiqi ah xittaa haddii uu duqoobo… haweeneydani waa mida ninkeeda uu jeclaanayo uuna jeclaanayo iyada oo dhan marna ka suurageli meyso in uu iloobo.
Ninku waxa uu jecel yahay haweeneyda keeneysa fikradda lama filaanka ah.. kuma kalifeyso mana ku sameyneyso warkeda iyo waxyaabaha ay kudhaqaaqeyso wuxuuna dareemayaa ninka in nolosh uu haweeneydani la nool yahay sida kitaab furan oo kale oo uu wax ka qaato waxna ku kala cadeysto si uu ugu noqdo arrinkaasi mid awooda iyo in haddii halis ay kusoo socoto uu ka bari noqdo.
Haweeneyda bixinta leh iyo daqaleynta xoolaha qalan.
Waxa uuna jecel yahay ninka sidoo kale in haweeneyda nolosha uu la wadaagayo ay gacanta u soo taagto markuu doonana uu u jaro laakiin ninku ma jecla in xaaskiisa ay xilli waliba noqoto mid awood leh isagana uu dareemayo awoodeeda
Sidoo kalena ma jecla ninka dafiictinimada xaaskiisa mar waliba inta uu xaalkeeda meeshii ugu xumaa ka gaaro.